Nagarik News - राष्ट्रपतिको आन्द्रामा दाग
राष्ट्रपतिको आन्द्रामा दाग
16 Jun 2013 | 09:32am
आइतबार २ असार, २०७०
काठमाडौं -राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव स्वास्थ्य उपचारका लागि जापान जाने भएका छन्। ठूलो आन्द्रामा समस्या देखिएपछि शनिबार चिकित्सकले उनलाई थप उपचारनिम्ति तत्काल विदेश जान सुझाएका हुन्।
लामो समयदेखि पेटसम्बन्धी रोगको औषधी लिइरहेका राष्ट्रपति यादवको शनिबार धापासीस्थित ग्रान्डी अस्पतालमा सिटी स्क्यान गरिएको थियो। रिपोर्टमा ठूलो आन्द्रामा दाग देखिएपछि चिकित्सकले उनलाई थप परीक्षण एवं उपचारका लागि विदेश लैजान सुझाएका थिए।
शनिबार साँझ नै मेडिकल बोर्डको आकस्मिक बैठकले उनलाई थप उपचारका लागि विदेश जान सिफारिस गरेको छ। निजी चिकित्सकले जापान वा अमेरिका लैजान सिफारिस मागेपछि मेडिकल बोर्डको बैठक राखिएको थियो।
बोर्डले नजिकको मुलुक लैजान सुझाएको छ। बोर्डको सिफारिस आधारमा राष्ट्रपतिलाई केही दिनमै जापान लगिनेछ। कुनै पनि नागरिक उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने भए मेडिकल बोडको सिफारिस चाहिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत बोर्डमा वीर अस्पतालका निर्देशक संयोजक, वीरकै एक सर्जन र फिजिसियन सदस्य हुन्छन्।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले चिकित्सकको सुझावका आधारमा थप परीक्षणका लागि जापान लैजाने तयारी भएको जानकारी दिए। 'मेडिकल बोर्डको सिफारिस शनिबार नै बनिसकेको छ, त्यही आधारमा विदेश लैजाने अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,' दाहालले भने, 'सम्भवतः एक/दुई दिनमै लगिन्छ।'
बोर्डको सिफारिसअनुसार जापानस्थित नेपाली दूतावासले अस्पताल खोज्ने र सरकारले उपचारको तारतम्य मिलाएपछि विदेश लगिने तय भएको छ। चिकित्सकले जतिसक्दो चाँडो विदेश लैजान सुझाएको दाहालले जानकारी दिए। स्रोतका अनुसार थप परीक्षणपछि शल्यक्रिया नै गर्नुपर्ने हुन सक्छ। राष्ट्रपतिको जाँच शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमै भइरहेकाले जापान नै लैजाने सल्लाह भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्रपति यादवको शुक्रबार पनि टिचिङमा स्वास्थ्य जाँच भएको थियो, तर त्यस्तो खराबी भेटिएको थिएन।
ग्रान्डीमा बिहान साढे ९ देखि ११ बजेको समयमा सिटी स्क्यान गरेर रिपोर्ट शीतल निवासमा पुर्‍याइएपछि विभिन्न चरणमा चिकित्सकसहित परिवारका सदस्य र सल्लाहकार बसेर छलफल गरेका थिए। ग्रान्डीमा पनि सुरुको चरणमा केही देखिएको थिएन, पछि सूक्ष्म परीक्षण (सिई सिटी) गर्दा दाग देखिएको थियो।
सम्बन्धित विषयका विशेषज्ञसहित, राष्ट्रपतिपुत्र डा. चन्द्रमोहन यादव सम्मिलित बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री विद्याधर मल्लिक र स्वास्थ्य सचिव डा. प्रवीण मिश्रलाई समेत बोलाइएको थियो। बोर्ड बैठक बोलाउने र जापानी दूतावासलाई भनेर सबैभन्दा राम्रो उपचार हुने अस्पतालमा समन्वय मिलाउन शनिबार नै निर्देशन भएको छ।
को–को जाने भन्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट हुनुपर्ने भएकाले आइतबार नभ्याइए सोमबारभन्दा ढिलो नलगिने स्रोतको भनाइ छ।
विश्वस्तस्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिमा क्यान्सरको आशंका भएपछि थप परीक्षण गर्न शनिबार नै निजी चिकित्सक डा. यादवदेव भट्टले परीक्षणका लागि विदेश लैजान मेडिकल बोर्डसँग सिफारिस मागेका थिए। बैठक साँझै बोलाइएको थियो। दाग ठूलो नभएकाले कुन तहको समस्या हो भन्न थप परीक्षण गर्नुपर्ने सुझाव विशेषज्ञका रुपमा आफूले दिएको शिक्षण अस्पतालका ग्यास्ट्रोफिजिसियन डा. शशि शर्माले बताए। 'सबै परीक्षण नेपालमा गर्न नसकिने अवस्था छ, त्यसैले बाहिर जान राम्रो हुन्छ,' उनले भने।
'क्यान्सर नै नभए पनि नफाले त्यसको सम्भावना हुन्छ भन्ने चिकित्सकको भनाइ छ,' शीतल निवासस्रोतले भन्यो।
राष्ट्रपतिमा आकस्मिक तौल घट्ने, खाना नरुच्ने भएपछि उपचार सुरु भएको थियो। आकस्मिक तौल घट्ने, खाना नरुच्ने र बारम्बार पखाला लाग्ने भएपछि चिकित्सकले नेपालमा उपलब्ध सबै विधिबाट परीक्षण एवं उपचार सुरु गरिहालेका थिए।
जापान पुर्‍याएपछि बायस्पी (सम्बन्धित ठाउँको मासुको टुक्रा काटेर जाँच गरिने विधि) गरेपछि यकिन हुने र तत्कालै थप उपचार सुरु गरिनेछ। 'थप परीक्षण र उपचार विश्वका सुविधासम्पन्न ठाउँमा गराउनुपर्छ भन्ने सुझाव सम्बन्धित चिकित्सकबाट आयो,' प्रेस सल्लाहकार दाहालले भने, 'त्यही आधारमा सम्भावित ठाउँबाट व्यापक छलफलसमेत भएको थियो।'
राष्ट्रपतिका निजी फिजिसियन डा. यादवदेव भट्ट भए पनि पेटको समस्या शिक्षण अस्पतालका शर्माले हेरिरहेका छन्। उनकै परामर्शमा शुक्रबार शिक्षणमै अधिकांश परीक्षण गरिएको थियो।